Malunga nathi - iSuzhou Kudi Trade Co., ltd.
I-Suzhou Kudi Trade Co., ltd.
I-Suzhou Kudi Trade Co., ltd. Ngomnye wabavelisi abakhulu bezixhobo zokuzilungisa izilwanyana kunye ne-leashes ezinokurhoxiswa e-China kwaye siye sasebenza ngokukodwa kule ntsimi ngaphezulu kweminyaka eli-19. Umzi-mveliso wethu wawuseSuzhou, osisiqingatha nje seyure kwindlela ngololiwe usuka eShanghai Hongqiao Airport. Sineefektri ezimbini ezizezona zixhomekeke ikakhulu kwizixhobo zokuzilungisa nakwizinto ezinokubuyiswa zizinja, iikhola kunye nezinto zokudlala zezilwanyana ezinendawo yonke yemveliso ngaphezulu kweemitha zesikwere ezingama-9000. SineWALMART Walgreen, Sedex P4, BSCI, BRC kunye ne-ISO9001audit ect. Sinabasebenzi bebonke malunga ne-230 kude kube ngoku.
Ngoku sine-800 sku kunye ne-130 yezinto ezinelungelo elilodwa lomenzi. Njengoko ngoku izinto ezintsha sisitshixo seemveliso, ke unyaka nonyaka siza kutyala imali engama-20% yenzuzo yethu kwizinto ezintsha ze-R & D kwaye sihlala senza iimveliso ezingcono kwizilwanyana zasekhaya. Okwangoku, sinezizwe ezingama-25 kwi-R & D tem kwaye sinokuyila izinto ezingama-20-30 minyaka le. Zombini i-OEM kunye ne-ODM zamkelekile kumzi-mveliso wethu.
Kwakhona umgangatho yinto esihlala sigxile kuyo. Sisoloko sinika abathengi bethu isiqinisekiso seminyaka emi-2 yeemveliso ukuqinisekisa umgangatho wethu.
Abathengi bethu bavela kumazwe angaphezu kwama-35 nakwimimandla. I-EU kunye nomNtla Melika yeyona ntengiso yethu iphambili. Sisebenze ngaphezulu kwama-2000 abathengi, kubandakanya iWalmart, iWalgreen, iPetro kunye neGadi yezilwanyana njl.njl.
Injongo yethu kukunika izilwanyana uthando ngakumbi, ukuphanda kunye nokuphuhlisa iimveliso ezivelisiweyo, ukwenza ubomi obulunge ngakumbi nobonwabisayo babantu nezilwanyana zasekhaya. Siyavuya ukubonelela abathengi bethu ngeemveliso ezintle kunye nezisombululo ezisebenzayo kunye nezoqoqosho kubomi babo bemihla ngemihla.
Wamkele undwendwelo lwakho! Sijonge phambili ekusebenzisaneni nawe!